एउटी नायीकाको निधन तर अर्कै नयीकालाई श्र्रद्धाञ्जली दिएपछि…. « Kalakhabar
प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश राख्ने १६ बुँढे प्रस्तावहरु सहित किराँत राई यायोक्खाको तेस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन समापन
सर्वोच्चमा कानुन व्यावसायी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल,प्रधान्याधिशले राजिनामा दिनुपर्ने सबैको अडान
Breaking News काठमाण्डौं उपत्यका सुन्धाराबाट विप्लवका दुई कार्यकर्ता पक्राऊ
प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश राख्न सम्भव नहुने मुख्य मन्त्रि राजेन्द्र राईको भनाई
किराँत राई यायोक्खाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न,१४ वटा विभिन्न देशहरुबाट प्रतिनिधिहरु सहभागी
नेपाली काँग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नं २ बाट युवा नेता शिरोमणी ओझाको उम्मेदवारी
आदिवासी किराँतीहरुको मुल पहिचान नै ‘राई, भएको किराँत यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राईको भनाई
बँदेलको ठोकाइबाट नेपालजञ्जमा सीता एयरको जहाज दुर्घटना
‘राई, शब्दलाई बहिष्कार गर्दै,आआफ्नो पहिचान लेखौ र लेखाऔ भन्ने किराँत महासंघको अपिल
प्रयोगशाला निर्माणका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिने
एउटी नायीकाको निधन तर अर्कै नयीकालाई श्र्रद्धाञ्जली दिएपछि….
प्रकाशित मिति : सोमबार, १९ आश्विन २०७७ १४:०३
कलाखबर संवाददाता,१९ असोज –काठमाण्डौं । बलिउड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जीको निधन भएको छ । मृगौला फेल भएका कारण शुक्रबार अबेर राती उनको बैंगलोरमा निधन भएको हो । बताइएअनुसार कीटो डाइट लिएका कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको हो ।
तर, मिष्टी मुखर्जीको निधन हुँदा अर्की अभिनेत्री मिष्टी चक्रवर्तीले तनाव झेल्नु परेको छ । एउटै नाम भएका कारण फ्यानहरु झुक्किएर मिष्टी चक्रवर्तीलाई सामाजिक संजालमा श्रद्धाञ्जली दिन थालेपछि उनले सफाइ दिनुपरेको छ ।
उनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आफू पूर्ण रुपमा स्वस्थ रहेको बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन् ‘केही मिडिया रिपोर्टका कारण आज मेरो मृत्यु भयो तर भगवानको कृपाले म स्वस्थ छु र मलाई अझै धेरै अगाडिसम्म जानु छ ।
कलाखबर,२ मंसिर –काठमाण्डौं । किराँत राई यायोक्खाले आवश्यक परे किरात प्रदेश नामकरणको लागि निर्णायक संघर्ष
कलाखबर,३० कात्तिक – काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यावसायी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ ।
कलाखबर,३० कात्तिक – काठमाण्डौं । काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रको सडक अबरुद्ध गर्न खोज्ने नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)
कलाखबर,३० कात्तिक – काठमाण्डौं । प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश राख्न सम्भव